Best Tongotra Manomboka Hevitra Ao Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Best Tongotra Manomboka Hevitra Ao Eoropa
(Last Nohavaozina: 16/01/2021)
Miantso ny junkies sy ny mpitady zava-mahaliana rehetra! Te hahafantatra ve ianao hoe inona ireo teboka fanombohana fitsangantsanganana tsara indrindra sy ny fomba hahatongavana any amin'ny lamasinina? Avy eo ianao eo amin'ny toerana tsara!
BEST Hiking START HEVITRA: DIMY Terre-MORONTSIRAKA Trail - ITALIA
Nihanika ao amin'ny Cinque Terre dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra tokony hatao ao Italia, ary iray amin'ireo tsara indrindra fanombohan'ny tongotra lavitra hevitra. Tongotra lavitra ny lalana no anisan'ny tsara indrindra any Eoropa, ary raha toa ianao ka tia an-kalamanjana na olona iray fotsiny ny sasany izay te fampiasana in eo fitondran Zavatra sakafo, io no iray amin'ireo fomba manome valisoa indrindra hankafizanao an'i Italia morontsiraka mahatalanjona.
Fa rehefa tongotra ny Cinque Terre tokony ho vonona. Avy fahatakarana lalana olana ho mpamatsy ny zavatra marina sy ny marina mandeha amin'ny fotoana taona, rehefa mahazo vaovao tsara hanao ny fahasamihafana eo amin'ny fiainana-manova fitsangantsanganana sy wearying slog.
Ahoana no ahatongavana any amin'ny Train:
• Indray mandeha in Italia, noho ny fanampian'ny Save A Train, ny fiaran-dalamby dia mbola ny fomba tsara indrindra hanatrarana Cinque Terre. Misy an-toerana fiaran-dalamby, ny Cinque Terre fiaran-dalamby Express, izay mikoriana nanaraka ny morontsiraka eo amin'ny stations Centrale de La Spezia sy Levanto. Tsy mijanona mihitsy tanàna dimy (Monterosso, Corniglia, Vernazza, Manarola, Riomaggiore), ary ianao no mila manampy hitondranao izany ho azy ireo hifindra eo indray mandeha ianao ao amin'ny faritra (raha tsy misafidy ny tongotra amin'ny lalana sarotra matetika-). Toy ny vanin-taona mafana 2016, ny vola lany ny Cinque Terre Express no € 4 isaky ny diany. Nandritra ny vanim-potoana eny-, matetika tamin'ny Novambra hatramin'ny Martsa, ny vidin'ny latsaka ny 1,80 €. Zavatra tsy manolotra fiaran-dalamby seza voatokana.
• Rehefa tonga avy any Florence, na Roma: Misy vitsivitsy isan'andro mivantana fiaran-dalamby avy any Firenze Santa Maria Novella fiantsonan'ny ho La Spezia Centrale; ny hafa dia mitaky anao hiova fiaran-dalamby in Pisa. Vidin-javatra manomboka amin'ny € 13,50. Ao amin'ny La Spezia, hanova ny Cinque Terre Express.
BEST Hiking START HEVITRA: MIARAHA MANDEHA Eagles - AOTRISY
The Eagle Walk no mandrafitra ny 23 mifandray dingana, izay manaraka ny fofonaina-maka lalana amin'ny alalan'ny Tirol. Ny tsara indrindra nanomboka hevitra tongotra lavitra any amin'ny faritra, fizarana maro dia azo jerena mora foana amin'ny alalan'ny tariby fiara sy fenoina toy ny feno- na antsasaky ny andro fitetezam-paritra. Tsy te hampahafantatra anao ny toerana tena fizarana ity bilaogy.
Na ianao mieritreritra ny andro fitsangantsanganana na multi-herinandro traikefa nahafinaritra tao amin'ny tendrombohitra, ho hitanao ny Eagle Walk ho lehibe ivelan'ny trano traikefa. Manolotra fahafahana hijery manam-paharoa, traikefa, ary mifandray amin'ny natiora.
Ny Top Haka: Lake Zireiner Jereo
Dia an-tongotra antsasak'adiny ho an'ny mpandeha an-tongotra indraindray. Avy Kramsach ao amin'ny Lower Inn Valley, handray ny seza hanandratra ny Sonnwendjoch trano. A fohy tongotra dia mitarika ho amin'ny idyllic Zireiner farihy, izay toerana an-dohasaha efa ho 1.800-metatra ambonin'ny ranomasina - lehibe toerana mangatsiatsiaka eny an-mafana fahavaratra volana. Ny tongotra manohy Zireiner Alm ahitra (1,698M) talohan'ny niverenany tany an-tampon'ny seza atraka, mamela anao ny mitaingin-miverina any an-Inn Valley.
Mora ny Tsangatsangana hatrany UK ka hatramin'ny Aotrisy lamasinina. Afaka mandeha amin'ny London any Vienne, Salzburg na Innsbruck afaka iray andro monja fiaran-dalamby haingam-pandeha. Na maka sakafo antoandro Eurostar avy any London ho any Brussels, a Thalys haingam-pandeha fiaran-dalamby ny Cologne, ary ny tsara dia tsara Nightjet natory fiaran-dalamby ho Innsbruck, Linz, na Vienna levitra. Rehefa any, mahazo ny Tirol Mora feno sy ny tambajotra-bahoaka fitaterana. Mora ny nandeha manodidina ny faritra amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. Mpitsangantsangana ta-handray ny ampahany na ny zavatra rehetra ny voromahery Walk dia afaka mahazo ny voalohany sy ny farany hevitra ny sehatra tsirairay mampiasa fitateram-bahoaka ao an-toerana.
BEST Hiking START HEVITRA: CAMINO DE SANTIAGO - SPAIN
Ny Camino fantatra amin'ny teny Anglisy ho toy ny Lalan'ny St James. Ny làlana fivahinianana masina Camino rehetra dia mankany Santiago de Compostela satria eto no misy ny sisa tavela amin'i St James, (Santiago), dia hita tamin'ny taonjato fahasivy. Ny fivahinianana masina dia nalaza tamin'ny 10, 11faha, ary taonjato faha-12 ary avy eo dia nihena tsikelikely ny lazany.
Tamin'ny taonjato faha-20, Saika tsy nisy nandeha na dia iray akory ny lalana. Avy eo tamin'ny faramparan'ny taona 1970 sy ny fiandohan'ny taona 1980 dia nanjary liana tamin'ny olom-bitsy ilay lalana. Nanomboka nanoratra izy ireo ary sarintany ny lalana indray.
Tamin'ny taonjato faha-21, ny hevitra ny fivahiniana masina dia angamba quaint. Na izany aza, ny fiezahana mandeha mandritra ny iray volana ary tapaka amin'ny fitaovana maoderina dia manafaka tokoa.
Sarria no tian'ny tanàna ny mpivahiny toy ny teboka izay Nankao anaty sambo ny Camino de Santiago. Ao amin 'ny mihoatra noho ny 300,000 mpanao fivahiniana masina izay niala Santiago de Compostela in 2017, ny sasany 60% dia nisafidy ny hanaraka ny Camino Frances. Ary mihoatra noho ny 80,000 tamin'izy ireo nifidy Sarria ho toy ny fiaingana. Ny antony lehibe indrindra amin'ny fisafidianana an'i Sarria dia ny fanomezana ny halavirana farafahakeliny takiana amin'ireo mpivahiny mba homena ny Compostela (ny taratasy fanamarinana ny mpitety fiangonana). Ny lavitra ho any Santiago azo rakotra tao anatin'ny dingana dimy sy mirehareha maro be zavatra ilaina safidy sy ny tolotra ho an'ny mpanao fivahiniana masina. Sarria dia mora ka tsy tokony amin'ny fitateram-bahoaka avy faritra samihafa ao Espaina.
Ahoana no hahazoana ny Sarria lamasinina:
Ny lamasinina dia iray amin'ireo indrindra aina safidy raha mandeha avy any Madrid ho Sarria. Misy mivantana fifandraisana izay miala Chamartin Madrid ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby indroa isan'andro, miaraka amin'ny dia fotoana ny adiny enina eo ho eo. Ary, Misy isan-karazany fiarandalamby izay mampifandray Madrid amin'ny Santiago de Compostela sy Lugo, Zavatra tanàna izay dia tena mora ny mahazo ny Sarria, fifandraisana mivantana amin'ny maro isan'andro. Afaka manontany fotoana rehetra sy peo amin'ny alalan'ny fifandraisana Renfe, Espaina ny orinasa fiaran-dalamby-pirenena.
Ny fiaran-dalamby ihany koa ny safidy tsara indrindra rehefa mandeha avy any Barcelona. Misy rohy mivantana isan'andro avy any Barcelona (na afaka manova amin'ny Monforte de Lemos), amin'ny fiaran-dalamby mandritra ny andro (raha manambatra ny Ave na lamasinina haingam-pandeha amin'ny Elanelana lavitra safidy) ary levitra fiarandalamby. Ny fotoana dia eo ho eo avy any Barcelona dia 12 ora. Ny fiaran-dalamby avy any Barcelona ho Sarria mifandray amin'ny hafa ihany koa ny tanàn-dehibe ao anatin'izany Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia, ary Leon.
Avy amin'ny Santiago de Compostela, Renfe manolotra fiarandalamby roa isan'andro ho Sarria: iray amin'ny 5 PM (adiny roa 'dia ny fotoana); ary amin'ny 6.07 PM (amin'ny lalana fotoana efa ho efatra ora).
avy Lugo, ny fiaran-dalamby koa no safidy ahazoana aina indrindra. Renfe manome fifandraisana maro isan'andro izay mahazo anao Sarria avy any Lugo in 30 minitra.
BEST Hiking START HEVITRA: WESTWEG Trail - ALEMAINA
Dia azo lazaina fa ny Westweg lalana no niandohan'ny rehetra lavitra alemà tongotra lavitra lalana. Lasa voalohany voatondro lalan'ny karazany Tamin'ny 1900. Nanomboka tamin'izay, ny lalana nitombo handrakotra lavitra ny 177 kilaometatra (285 kilaometatra) - manomboka any Pforzheim any avaratra ary miafara amin'ny Basel atsimo.
Mifanohitra amin 'ireo Mittelweg sy ny Ostweg, ny Westweg mandray anareo ny ankamaroany amin'ny alalan'ny andrefana eny an-tendrombohitra. Ary rehefa mandeha, dia vavolombelona ny voajanahary isan-karazany lehibe indrindra alemà ambany tandavan-tendrombohitra. Ny mikitroka kypreso sy ny ala kesika. Izany no manome ny tandavan-tendrombohitra ny anarany, ny treeless expanses tany avaratra Black Forest. Mangina tendrombohitra farihy, Panoramika vatolampy crests, glacial lohasaha, ary ny tendrombohitra.
In eo, ianao tampon'isa ambony indrindra hiakatra hatrany hatrany. Ianao tongotra eo amin'ny lembalemba ny Hornisgrinde ary mitsidika ny Belchen sy ny Hochblauen. Mankafy ny fomba fijery eo amin'ny Schliffkopf sy mandehandeha ny Maoro avo manodidina ny Hohloh. Ny teboka tena avo ny fitsangantsanganana, mazava ho azy, no ho fiakarana ho any amin'ny Feldberg. Ny tendrombohitra avo indrindra ao amin'ny Black Forest.
Ahoana no hahazoana ny Westweg lamasinina:
Tongotra lavitra indrindra eny anelanelany azo nisara-in manageable lavitra. Izany dia satria ny ankamaroan'ny tanàna manamorona ny lalana tongotra lavitra dia afaka ny ho tonga tsara lamasinina. Fanampiana lehibe ho an'ny mieritreritra ny fitsangantsanganana dia ny ankapobeny sarintany maimaim-poana ny Schwarzwald Tourismus GmbH (Ludwigstrase 23, 79104 Freiburg, www.blackforest-tourism.com). Maneho ny lalamby fitaterana sy fiaran-dalamby rehetra ho an'ny KONUS ao amin'ny faritra sy any ivelany.
Ankoatry ny, vondrom-piarahamonina maro no toro-hevitra manokana ho an'ny tongotra Tours sy andro fitsangatsanganana noho ny KONUS vahiny. Raha mikasa misy intsony nijanona dia mety ho ilaina ny hahazo SchwarzwaldCard ihany koa. Io karatra fampiasam-bola dia tsara raha mampiasa ny fihenam-bidy mifandray ny karatra bebe.
Vonona ny tafio ny tongotra lavitra kiraro sy mankafy ny natiora sasany tongotra lavitra? Boky ny fiaran-dalamby ao anatin'ny minitra, ary tsy misy sarany fanampiny amin'ny Save A Train!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hiking-start-points%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#fiakaran'ny #Hiking #Hevitra fitsangatsangana #lalana longtrainjourneys trainjourney fiaran-dalamby soso-kevitra
Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Britain, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe